Tsy nahomby ny fanavaozana ny finday iPhone? Ity ny antony & The Fix! - Iphone
iTunes dia tsy nahazo ny iphone 4
foana ny iphone 5
iphone 6 dia mamono irery
laharana fitendry iphone tsy mandeha
Ahoana ny fomba hamadihana wifi amin'ny iphone 6
Tsy nahomby ny fanavaozana ny finday iPhone? Ity ny antony & The Fix!
Tsy afaka miantso na mandray antso ianao na mampiasa angona finday amin'ny iPhone. Nahazo fampandrenesana momba ny fanavaozana ny sela ianao, saingy tsy azonao antoka ny dikan'izany. Ao amin'ity lahatsoratra ity, aho hazavao ny antony tsy nahombiazan'ny fanavaozana ny finday iPhone ary asehony anao ny fomba fanamboarana tsara ny olana !
Manana iPhone 7 ve ianao?
Modely vitsivitsy an'ny iPhone 7 vitsivitsy no misy lesoka amin'ny hardware izay mahatonga ny fampandrenesana Cellular Failed Failed. Izy io koa dia mampiseho ny fampisehoana ny iPhone Tsy misy serivisy eo amin'ny zoro ambony havia amin'ny efijery, na dia misy serivisy finday aza.
Fantatr'i Apple ity olana ity, ary manolotra fanamboarana fitaovana maimaimpoana izy ireo raha mahafeno fepetra ny iPhone 7 anao. Zahao ny tranokalan'i Apple jereo raha mahafeno fepetra amin'ny fanamboarana maimaimpoana ny iPhone 7 anao .
Fanamboarana vonjimaika ho an'ny iPhone sasany
Nisy ny olona nitatitra fa ny famonoana ny fiantsoana Wi-Fi sy ny Voice LTE dia nametraka ny olana tamin'ny iPhone-ny. Azo antoka fa tsy vahaolana tonga lafatra io, ary te hiverina ianao ary hamerina ny fiantsoana Wi-Fi sy ny feo LTE hiverina aorian'ny fanavaozana ny iPhone ho an'ny kinova iOS vao haingana.
Zava-dehibe ihany koa ny manasongadina fa tsy ny mpitatitra tsy misy tariby rehetra no manohana ny fiantsoana Wi-Fi na Voice LTE. Raha tsy mahita ireo safidy ireo amin'ny iPhone ianao dia mirosoa amin'ny dingana manaraka.
Sokafy ny fikirana ary kitiho Cellular -> Fiantsoana Wi-Fi . Vonoy ny switch eo akaikin'ny Fiantsoana Wi-Fi amin'ity iPhone ity hamonoana ny fiantsoana Wi-Fi.
Manaraka, miverena amin'ny Fikirana -> Cellular ary tap Safidy data momba ny sela . paompy Alefaso LTE -> Data ihany hamono ny Voice LTE. Ho fantatrao fa tsy mandeha ny Voice LTE rehefa miseho eo akaikiny ny mari-maso manga Data ihany .
Ity fitaovana ity dia tsy tohanana
Atsaharo ny Mode Airplane ary miverina
Tsy hifandray amin'ny tamba-jotra finday ny iPhone-nao raha alefa ny Airplane Mode. Indraindray ny fanodinana ny Mode Airplane on and off indray dia afaka manamboatra olana madinidinika amin'ny fifandraisana finday.
Sokafy ny setting ary kitiho ny switch eo akaikin'ny Airplane Mode hamelomana azy. Kitiho indray ny switch mba hamonoana azy. Ho fantatrao fa tsy mandeha ny Airplane Mode rehefa fotsy ny switch.
Vonoy ny angona sela ary avereno
Fomba hafa haingana hanamboarana olana madinidinika momba ny fifandraisana finday dia ny famonoana ny Data Cellular ary miverina. Tsy mandeha foana izany, fa tsy maharary ny manandrana.
Sokafy ny fikirana ary kitiho finday . Avy eo, kitiho ny switch eo akaikin'ny Cellular Data eo an-tampon'ny efijery mba hamonoana azy. Kitiho indray ny switch mba hamerenanao indray ny Cellular Data.
efijery mainty iphone 6s tsy hirehitra
Ny fanavaozana ny fikirakirana ny mpitatitra dia fanavaozana navoakan'ny mpitatitra findainao na Apple hanatsarana ny fahafahan'ny iPhone mifandray amin'ny tambajotram-pifandraisan'ny mpitatitra anao. Ny fanavaozana ny fanazarana ny mpitatitra dia tsy avoaka matetika toy ny fanavaozana ny iOS, fa zava-dehibe ny manamarina matetika sao misy misy.
Misokatra Fikirana ary tap About hanamarina ny fanavaozana ny fikirakirana ny mpitatitra. Raha misy fanavaozana, misy pop-up hiseho ao anatin'ny folo segondra.
paompy vaovao farany raha misy fanavaozana ny toeran'ny mpitatitra. Raha tsy misy fanavaozana, mandroso amin'ny dingana manaraka.
Vaovao farany iOS amin'ny iPhone
Matetika i Apple dia mamoaka fanavaozana ny iOS hampidirana endri-javatra vaovao sy hanamboarana bibikely toa ilay iainanao dieny izao. Misokatra Fikirana ary tap General -> Fanavaozana ny lozisialy hijerena raha misy fanavaozana iOS misy. paompy Sintomy sy apetraka raha misy fanavaozana rindrambaiko misy.
Esory ary avereno ny karatra SIM anao
Satria tsy fahita amin'ny anao izany iPhone hiteny hoe tsia SIM rehefa voarainao ny fampandrenesana Cellular Update Failed, dia tsara ny mamoaka ny karatra SIM anao ary avereno ao.
Raiso ny fitaovana ejector karatra SIM anao na, satria mety tsy manana ny iray amin'ireo ianao dia alaharo ny taratasy misy taratasy. Apetaho ao anaty lavaka ao anaty fitoeram-bolan'ny karatra SIM ilay fitaovana ejector na ny taratasinao mba hisokatra. Avereno ao anaty iPhone ny lovia karatra SIM mba hamerenanao indray ny karatra SIM.
Avereno ny toe-javatra Network iPhone
Ny famerenana ny fikirakirana ny tamba-jotra dia mamafa ny fampiasa Cellular, Wi-Fi, Bluetooth, VPN amin'ny iPhone-nao. Amin'ny famafana ny fikirana tambajotra rehetra indray mandeha, dia azonao atao indraindray ny manamboatra olana rindrambaiko manahirana.
Sokafy ny fikirana ary kitiho General -> Reset -> Avereno ny fametrahana ny tambajotra . Tsindrio Reset Network setting hanamafisana ny fanapaha-kevitrao.
Ny famerenana amin'ny laoniny DFU no famerenana amin'ny laoniny lalina indrindra an'ny iPhone. Ny tsipika kaody tokana dia voafafa ary avoaka indray, mamerina ny iPhone amin'ny fivadihan'ny orinasa.
maninona no milaza fa mety tsy tohanana io fanampin-javatra io
Alao antoka fa ianao mitahiry backup amin'ny iPhone alohan'ny hametrahana azy amin'ny maody DFU! Hamafa ny zava-drehetra avy amin'ny iPhone mandritra ny dingan'ny famerenana amin'ny laoniny DFU. Ny fitehirizana backup dia hahazoana antoka fa tsy ho very ny sarinao sy ny horonan-tsary ary ireo rakitra hafa voatahiry.
Rehefa vonona daholo ianao dia zahao ny lahatsoratray hafa hianarana ny fomba fametrahana ny iPhone amin'ny fomba DFU ary avereno!
Mifandraisa amin'ny Apple na ny mpitatitra tsy misy tariby
Te hifandray amin'i Apple ianao na ny mpampita anao tsy misy tariby raha toa ka mbola milaza ny iPhone fa tsy nahomby ny fanavaozana ny sela aorian'ny fametrahana ny maody DFU. Mety misy zavatra tsy mety amin'ny modem an'ny findainao iPhone.
Manangana fotoana ao amin'ny Apple Store anao eo an-toerana hahitana raha afaka manampy anao hamaha ny olana ny teknolojia Apple. Na izany aza, aza gaga raha milaza aminao ny Apple mba hifandraisanao amin'ny mpampita finday. Mety hisy olana sarotra amin'ny kaontinao izay tsy voavaha raha tsy ny solontenan'ny serivisy ho an'ny mpanjifanao.
Ireto ny nomeraon-telefaona ho an'ny mpanjifa amin'ireo mpitatitra tsy misy tariby dimy lehibe indrindra any Etazonia:
Nohavaozina ary vonona handeha!
Nametraka ny olana amin'ny iPhone ianao ary afaka manomboka miantso indray! Hamarino tsara fa mizara ity lahatsoratra ity amin'ny media sosialy ianao mba hampianarana ny fianakavianao sy ny namanao ny zavatra tokony hatao rehefa milaza ny iPhone fa tsy nahomby ny fanavaozana ny sela. Aza misalasala mamela fanontaniana hafa anananao momba ny iPhone ao amin'ny faritra misy hevitra etsy ambany.